संगम प्रेम भनेको के हो? | बेजिया
मारिया जोस रोल्डन | 27/05/2021 22:00 | सम्बन्ध
मिश्रित प्रेम भनेको स्वस्थ, पारस्परिक र सक्रिय सम्बन्धमा शर्त लिने दुई व्यक्तिको बीचमा हुने एक हो। यी व्यक्तिहरूले जीवनका लागि मानिने परम्परागत प्रेमलाई पन्छाउने निर्णय गर्दछन् र आदर र सञ्चार जस्ता दम्पतीहरूमा यति महत्त्वपूर्ण मूल्यहरूमा आधारित अधिक वास्तविक प्रेम रोज्छन्।
विषाक्तता र प्रेम दु: ख हो भन्ने तथ्यलाई अलग राख्नुहोस्, एक यथार्थवादी र पूरै स्वस्थ प्रेम बाँच्न। यसपछिको लेखमा हामी यस किसिमको प्रेमले के समावेश गर्दछ र विशेषताहरू कि यो पार्टनरमा नै दिनुपर्नेछ।
1 मिश्रित प्रेम
2 संगम प्रेमको केहि विशेषताहरु हुन्छन्
यस प्रकारको प्रेम यस तथ्यबाट सुरू हुन्छ कि एक जोडीमा जहिले पनि पार्टीहरू बीच पारस्परिक समानता र समानता हुनुपर्दछ। यो निस्सन्देह अर्को व्यक्तिलाई साँच्चिकै माया गर्ने तरिका हो। प्रेममा, सबै कुरा मान्य छैन र त्यहाँ असमानता र खराब ब्यबहार हुन सक्दैन। दुर्भाग्यवस आज सम्म, यो क्रम जारी छ र धेरै महिलाहरु आफ्नो साझीदारहरु को अधीनमा छन्, यो महसुस नगरी।
संगम प्रेमको केहि विशेषताहरु हुन्छन्
त्यहाँ असंख्य विशेषताहरु छन् कि दुई व्यक्तिहरु बीच प्रेम बनाउँछ संगम:
त्यहाँ रुचि र दम्पतीको एक ठूलो प्रयास छ किनकि प्रेम र सम्बन्ध बलियो हुन्छ र अगाडि बढ्छ। यो देखा पर्नका लागि तपाईसँग दम्पतीको बीचमा पूर्ण संलग्नता हुनुपर्दछ।
त्यहाँ एक्लोपन र एक्लो हुने डर छैन किनकि कुनै भावनात्मक निर्भरता छैन। जब चीजहरू काम गर्दैनन् सम्बन्ध एक परिपक्व तरीकामा र संघर्ष वा झगडामा नपुगी समाप्त भयो।
जोडीमा बराबर भागहरूमा पारस्परिक सम्मान र पारस्परिक सम्मान हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै शक्ति संघर्ष र न त अर्को माथि हुन सक्छ।
कल्याण निरन्तर साथसाथै पारस्परिक पनि हुनुपर्छ। एक पार्टी पाउनु पर्छ तर दिनु पर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि दम्पती खुशी छन्।
दुबै व्यक्तिको सहयोग र कार्य आवश्यक छ किनकि सम्बन्ध बलियो हुँदै जान्छ। एक पार्टीमा सक्रिय छ र अर्को निष्क्रिय छ सम्बन्धमा जारी राख्न यो बेकार हो।
कुनै पनि दुई अर्कोको अधीनमा हुन सक्दैन। व्यक्तिगत ठाउँको सम्मान गर्नैपर्दछ ताकि कुनै पनि समय बाँधिएको महसुस नगरी कार्य गर्न पर्याप्त स्वतन्त्रता हुन्छ।
छोटो, संगम प्रेम दुई स्वतन्त्र व्यक्तिहरु को एक जोडी गठन गर्न खोज्छ। सम्बन्ध दिनदिनै बढ्दै जानुपर्दछ र दुबै व्यक्तिको काम र सहयोगका लागि धन्यवाद। समानता र पारस्परिक सम्मान यस प्रकारको प्रेमको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष हो। न त कोही व्यक्ति बाँधिन्छ र तिनीहरू फिट देख्दा सम्बन्ध समाप्त गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा भावनात्मक रूपमा राम्रो हुनु र प्रेमको स्वस्थ प्रकारको अभ्यास गर्नु हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » सम्बन्ध » संगम प्रेम भनेको के हो?
के अनुहार रोजासिया कारण गर्छ? यसको उपचार कसरी गर्ने